DEG DEG: Ciidammada ammaanka oo la wareegay amniga Hotelka Maka Al-Mukarama – Radio Muqdisho
Ciidammad aammaanka ayaa la wareegay ammaanka Hotelka Maka Al-Mukarama oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kaddib markii ay ciidanka gaarka ah ee Gaashaan ay toogteen dhammaan kooxdii weerarka ku soo qaadday hoteelka.
Wariye Nuur Siciid Tahliil oo ka tirsan Radio Muqdisho ayaa ku soo warramaya in ciidanka booliska qeybtiisa miinada baarta ay gudaha u galeen hoteelka, kaddib markii ay ciidanka hay’adda NISA ay toogteen qofkii ugu dambeeyay kooxdii hubeysneyd ee Hotelka ku jiray.
Sidoo kale waxaa hoteelka laga saaray dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku go’doonsanaa.
Ciidanka ammaanku waxay toogteen dhammaan kooxdii weerarka soo qaadday oo ka koobneyd shan qof. kuwaas oo meydkoodu uu yaallo gudaha hoteelka.
Wixii warar ah ee ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonnaa
Wasiirka arrimaha gudaha: Waxaan aamminsannahay inaan wada hadli karno Soomaaliland